Alexei Navalny: Ninkii ay Putin is hayeen oo looga shakisanyahay in la sumeeyay - BBC News Somali
Alexei Navalny: Ninkii ay Putin is hayeen oo looga shakisanyahay in la sumeeyay
Lahaanshaha sawirka @Navalny
Image caption Navalny ayaa labo mar lagu weeraray qad lagu buufiyay
Ninka ugu caansan mucaaradka dalka Ruushka, Alexei Navalny ayaa laga saaray isbitaalkii Moscow ee la dhigay kadib markii uu ka sheegtay xasaasiyad ama elerji jirka ah.
Baaritaan lagu sameeyay ayaa muujinaya in uu dhibaato ka qabo indhaha, iyo jirka oo ay wax badan kasoo daateen, balse dhaqtarkiisa waxa uu qabaa in ninkan lagu weeraray 'sun halis ah'.
Dhaqtaradda waxa ka hor timid in isbitaalka laga saaro oo dib loogu celiyo xabsiga, isaga oo horey ugu jirey muddo 30 maalmood ah kadib markii uu sabtidii ku baaqay mudaaharaad aysan dowladda ogoleyn.
Navalny ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay muuqaal muujinaya isaga oo ay booliiska xirayaan xilli uu gurigiisa ka baxayay si uu usoo sameeyo orod rucleyn ah oo qeyb ka ah jimicsigaa maalinlaha ah.
Wuxuu noqday ninka ugu caansan ee sida bareerka ah uga horyimid hoggaamiyaha awoodda badan ee Ruuhska Vladamir Putin, isaga oo xisbiga madaxweynaha ku tilmaamay 'tuugo', iyo 'kuwa dhiigga shacabka dhuuqaya'.
Image caption Navalny
Welisa uma aysan suurtogalin in uu xaqiijiyo riyadiisa ugu weyn ee ah in uu Putin kula loolamo sanduuqa codbixinta, isaga oo sannadkii 2018-kii laga hor istaagay in uu xitaa tartamo kadib markii ay maxkamad ku xukuntay dambiyo wax isdabomarin ah oo lagu soo eedeeyay.
Sannadkii 2008-dii ayuu kasoo shaac baxay siyaasadda Ruushka kadib markii uu bilaabay in uu sameeyo qoraalo uu ku dhaliilayo dowladda.
Fallaagada Suuriya 'dib ayey isugu tagayaan' - Putin
Putin: dabka Ruushka dayacaad kama marnayn
Olole uu sameeyay sannadkii 2011-kii ayaa keentay in ay is dhinto taageeradii loo hayay xisbiga United Russia ee madaxweyne Putin.
Balse guushaas lafteeda ayaa waxaa ka dhashay mudaaharaadyo kadib markii xisbigan lagu eedeeyay ku shubasho iyo wax is dabomarin.
Image caption Alexei Navalny oo isku dayay in uu isu diiwaangaliyo tartanka duqa magaalada Moscow July 10, 2013.
Kadib xabsi kooban, sannadkii 2013-kii ayaa loo ogolaaday in uu u tartamo kursiga duqa magaalada, wuxuuna galay kaalinta labaad, wuxuu heley 27% codadka, isaga oo aad ugu dhowaaday ninkii uu Putin watay ee Sergei Sobyanin.
Taas waxaa loo arkay guul aad u weyn maadaamaa uusan galaangal u lahayn taleefishinka qaranka iyo warbaahinta kaleba, waxayna dadka ku doorteen olole afka la'isku gaarsiiyay fariimaha.
Image caption Mar uu ku jirey ololaha doorashada
Maxkamadda sare ee Ruushka ayaa laashay xukun maxkamad kale ay ku heshey Mr Navalny in uu wax is dabo marin sameeyay, waxayna maxkamadda sare xukunkeeda ku sheegtay in go'aankii hore aanan loo cuskanin caddeymo waafi ah.
Sidaas oo ay tahay sannadkii 2017-ka oo kaliya waxaa la xirey 3 jeer, xarigiina waa mid joogto ah illaa iyo hadda.
Waxa ka go'an in uu sii halgamo, wuxuuna BBC-da u sheegay in waxa kaliya ee dalalka Reer Galbeedka u tari karaan dadka Ruushka in ay tahay in ay la dagaalamaan wax uu ku tilmaamay 'lacagaha wasaqaysan' ee siyaabaha musuqa lagu heley.
Waxa uu sheegay in hantida Ruushka boqolkiiba 83% ay gacanta ugu jirto tiro aad u yar oo dad ah.
Bishii April sannadkii 2017-kii ayaa lagu weeray qad cagaaran oo wajiga looga buufiyay, wuxuuna ninkan sheegay in ay aad u waxyeeleysay, isbitaalna loo dhigay.
Hadda Navalny wajiga ayuu ka bararaa, indhaha ayuu ka sheegtaa, jirkana waxbaa kasoo daatay, dhaqaatiirtana waa ay fahmi la'yihiin waxa heley.
Dhaqtarkiisa waxa uu sheegay in Navalny uusan horey u qabin wax xasaasiyad ah, lagana yaabo in lagu weeraray sun halis ah.
Waxa ay hadda ka qaadeen qeyb ka mid ah tintiisa iyo funaanadiisa garanta ah si loogu sameeyo baaritaan caafimaad oo madax banaan.